किन जोखिममा छन् विद्यालय जाने बालबालिका ? - चौतारी पोष्ट अनलाइन
विद्यार्थी चढ्ने बस र विद्यालयमा पनि भौतिक दूरी पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन्। जोखिम अवधिभर सामूहिक क्रियाकलाप गराउन नहुने डा. प्याकुरेलले बताए।अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
Prevएमसीसीको बिरोधमा झापाको काँकरभिट्टामा प्रदर्शन, प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री देउवाको पुत्ला जलाए
Nextअसोज ४ देखि नयाँ नोट